Horudhac: Juventus vs Barcelona, Pirlo vs Koeman… (Shaxda macquulka ah & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Turin) – Gool FM
Haaruun October 28, 2020
(Yurub) 28 Okt 2020. Waxaa la dhihi karaa kulanka ugu xiisaha badan wareegga Guruubyada Champions League ee 2020-21 ayaa ka dhici doona Turin caawa, iyadoo Juventus ay martigelin doonto Barcelona kulan dib noo xusuusinaya final-kii tartankan ee 2015.
Juventus ayaa doonaysa inay Barcelona ka aar-gudato guuldarradii soo gaartay Final-kii Champions League ee 2015-kii.
Taariikhda: Arbaco 28 Okt 2020
Garsooraha: Danny Makkelie (Netherlands)
Sida ay haatan wax yihiin, Cristiano Ronaldo ayaa seegi doona la midoobidda Lionel Messi ee kulankan kaddib markii laga helay Korona Fayras markale todobaadkii hore.
Weston McKennie ayaa ugu yaraan ka bogsaday Fayraska, waxaana markale uu diyaar u yahay kooxda Juventus.
Matthijs de Ligt ayaa ku sii dhowaanaya ku soo laabashada safka kooxda koowaad kaddib qalliin garabka ah oo lagu sameeyey bishii Agoosto, laakiin diyaar uma noqon doono inuu wajaho Barcelona.
Alex Sandro iyo Giorgio Chiellini ayaa sidoo kale dhaawacan waxaana walwal laga qabaa inay seegi doonaan kulanka martida loo yahay, taasoo ka dhigeysa inay daafacyadu ku yar yihiin Juve.
Natiijooyinka Scan-kii la marsiiyey ayaa shaaca ka qaaday Leonardo Bonucci inuusan qabin wax dhaawac muruqa ah kulankii Verona, laakiin wuxuu weli u baahan doonaa in xaaladdiisa la la socdo.
Tababare Andrea Pirlo ayaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto afar daafac maadaama Juventus ay ka maqan yihiin daafacyo.
Paulo Dybala ayaa ku soo bilowday kaliya hal kulan tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, mana u badana inuu ku soo bilowdo kulanka Barcelona.
Indhaha oo dhan waxay u jeedsan doonaan Arthur, kaasoo ka tagay Barcelona kuwaasoo ka horyimid rabitaankiisa ah inuu ku biiro Juventus suuqii xagaaga.
Aaron Ramsey ayaa laga yaabaa inuu buuxiyo booska Old Lady, iyadoo Dejan Kulusevski uu ka dambeeyo Alvaro Morata.
Adrien Rabiot iyo Rodrigo Bentancur ayaa ku tartamaya booska koowaad ee khadka dhexe.
Philippe Coutinho ayaa lagu soo warramayaa inuu soo gaaray dhaawac muruqa ah mana la heli doono kulanka caawa, 17-sano jirka Pedri ayaa laga yaabaa inuu safto oo shaqada cabo kaddib markii uu ku bilaabay kulanka El Clasico todobaadkan.
Gerard Pique ayaa ganaax ku seegaya kulankan kooxdiisa Barcelona ay caawa ciyaareyso kaddib markii uu casaan qaatay kulankii ugu dambeeyay ee Champions League, maqnaanshihiisa ayaana qasab ku noqon doona inay wax badan bixin karto kulanka caawa.
Miralem Pjanic ayaa si aad ah u doonaya inuu wajaho kooxdiisii hore, laakiin wali wuxuu ku dadaalayaa sidii uu taam buuxa ugu noqon lahaa kulanka mana ahan wax la la yaabo in la arko isagoo kursiga keyd fadhiya kulankan.
Sergio Busquets runtii wuu dhibtooday kulankii Real Madrid ee isbuucaan, laakiin Pjanic ayaan wali taam buuxa ahayn, Macallin Ronald Koeman ayaana haysta xulashooyin yar waqtigaan.
Isagoo kursiga keydka looga taagay kulanka El Clasico ee Sabtida, Antoine Griezmann ayaa riixi doona in dib loogu soo celiyo safka hore ee kooxda kulanka caawa.
Trincao iyo Ousmane Dembele ayaa sidoo kale ah xulashooyinka garabka ee kooxda Barcelona.
Sergino Dest iyo Sergi Roberto ayaa tartan ugu jira sidii ay ugu soo bilaaban lahaayeen garabka midig ee kooxda martida ah.
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii 14-aad ee u dhexeeya kooxaha Juventus iyo Barcelona ee tartan kubadad cagta, iyadoo kooxda reer Talyaani ay ku guuldarreysatay inay shabaqa soo taabato saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaareen kooxda reer Spain, waxayna saddexaad kulan la kulantay 2 barbaro iyo 1 guuldarro.
>- Tartankan Juventus lix kulan oo ay garoonkeeda kula ciyaartay waligeed wax guuldarro ka soo gaarin Barcelona, waana heerkoodii ugu fiicnaa oo ay ka haystaan koox ay kaga horyimaad tartammada Yurub ah, iyada oo ay weheliso lixda kulan ee aan laga badinin ee ay la ciyaartay Atletico Madrid (5 Guul iyo 1 Barbaro).
>- Barcelona ayaa kaliya hal guuldarro la kulantay 17-kii kulan ee ugu dambeeyay UEFA Champions League-ga heerka guruubyada, waxaana ay haystaa 10 Guul iyo 6 barbaro, iyadoo guuldarro la’aan ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Guushii ay Juventus ka gaartay kooxda Dynamo Kiev waxay ahayd guushoodii 99-aad ee ay gaaraan UEFA Champions League, waxaana ay indhaha ku hayaa inay noqdaan kooxdii ugu horreysay ee Talyaani ah oo gaartay 100 guul tartankan, kulankan ay wajahayaan Barcelona waa kooxdii 200-aad ee Champions League, waxaana ay haystaan 99 guul, 52 barbaro iyo 48 guuldarro.
>- Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa dhaliyay goolal badan tartanka UEFA Champions League heerkiisa Guruubyada in ka badan xiddig kasta oo ka mid ah kuwa ciyaaray tartankan (69 gool ayuu dhaliyey 73 kulan oo uu ciyaaray), halka qaab ciyaareedka haatan ee tartanka tan iyo kal ciyaareedkii 2003-04, kaliya Cristiano Ronaldo oo 24 ah heerka Guruubyada uu ka badan yahay caawinta marxaladdaan marka loo eego laacibkan reer Argentine (22).
>- Kooxda Juventus ayaa guuleysatay Todobo ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey Champions League.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalinaysay ugu yaraan labo gool shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey Champions League.